मोहन अग्रवाल भागेपछि घरमा प्रहरी छापा, सुन ओसार्ने ज्याकेटदेखि नगदसम्म भेटियो « News24 : Premium News Channel
मोहन अग्रवाल भागेपछि घरमा प्रहरी छापा, सुन ओसार्ने ज्याकेटदेखि नगदसम्म भेटियो
काठमाडौँ । करिब ३८ क्वीन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा मुख्य लगानीकर्ता भनिएका र सनम शाक्य हत्याकाण्डका नाईके एमके भनिने मोहनकुमार अग्रवालको अनामनगरस्थित घरमा प्रहरीले शुक्रबार छापा मारेको थियो । शुक्रबार प्रकरणको अनुसन्धान गर्न गठित विशेष अनुसन्धान समितिले उनको घरमा छापा मारेको हो ।
बन्द अवस्थामा रहेको घरबाट समितीले ३० लाख रुपैयाँ नगद, २ किलो चाँदी, १० तोला सुन साथै तीन थान सुन बोक्ने ज्याकेट र सुन बोक्ने खाली डिब्बा पनि बरामद गरिएको छ । प्रहरीले बा १० च २८२ नम्बरको गाडीसहित अन्य केही महत्वपूर्ण कागजातहरु बरामद गरेको दाबी गरेको छ । केही समयअघिसम्म समितीको सम्पर्कमा रहेकी एमकेकी श्रीमती समेत घरमा भएको थप सुन र नगद लिएर भागेको अनुमान गरिएको छ । थप अनुसन्धान भईरहेको समितीले जनाएको छ । घरमा भएको अन्य सुन अग्रवाल पत्नी निलमले लिएर कतै लुकेर बसेको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ ।
सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका ३ स्थायी घर भएका अग्रवाललाई छानबिन समितिले उनलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरे पनि हालसम्म पक्राउ पर्न सकेका छैनन् । यसअघि प्रकरणमा पक्राउ परेका राप्रपा प्रजातन्त्रिकका नेता भुजुङ गुरुङले गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वर पौडेलको नेतृत्वमा गठन भएको समित समक्ष बयान दिने क्रममा ३३ किलो सुनको लगानीकर्ता मोहनकुमार अग्रवाल भएको बताएका थिए । जिल्ला अदालत मोरङमा पेश भएको अभियोग पत्रमा भुजुङले साढे ३३ किलो सुनमा मोहन अग्रवाल एमकेले लगानी गरेको र त्यसको कमिसन आफुले पनि पाउने बयान दिएका थिए ।
प्रहरीले यो प्रकरणको अनुसन्धान थाले लगत्तै एमके घरमा ताला लगाएर फरार भएका थिए । भने सुन तस्करीको मुख्य नाइके गोरे भनिने चुडामणी उप्रेतीले पनि सुन तस्करका नाइके अग्रवाल नै भएको बताउँदै आएका छन् । अग्रवाल यसअघि पनि पटक पटक सुन तस्करीमा संग्लन भएको आरोपमा पक्राउ पर्दै र सेटिङमा छुटदै गरेका पात्र हुन् । अग्रवाल भारतमा लुकेर बसेको आशंका गरिएको छ ।
गभ्भीर मुद्दामा किन बोले भण्डारी, खरेल र मल्ल ?
साँढे ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्यको हत्या प्रकरण प्रहरीका एसएसपी दिवेश लोहनी, डिएसपी प्रजित केसी र सई बालकृष्ण संजेललाई फसाइएको भन्दै नेपाल प्रहरीका ३ पूर्व उच्च अधिकारीले प्रहरी अभियुक्तहरुको बचाउ गरे । नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी पूर्व एआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी, डिआइजीद्धय हेमन्त मल्ल ठकुरी र रमेश खरेलले संयुक्त रुपमा पत्रकारहरुसँग भेट गरी सुन तस्करीको अनुसन्धान त्रुटिपूर्ण रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
सुनकाण्ड जस्तो गम्भीर मुद्धामा अभियुक्तहरुको बचाउ गर्दै नेपाल प्रहरीका पुर्ब एआईजी भण्डारी, पूर्व डिआइजी मल्ल र खरेलले एसएसपी दिवेश लोहनी, डिएसपी प्रजित केसी र सई बालकृष्ण सञ्जेल निर्दोष रहेको दाबी गरेका थिए । लोहनीलगाएका प्रहरी अधिकारीलाई फसाइएको भन्दै छानबिन समितिको नेतृत्वप्रति प्रश्न उठाएका छन् । पुर्व एआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीले निष्ठावान प्रहरी कर्मचारीलाई फसाउने काम भएको आरोप लगाएका छन् । त्यस्तै लोहनीलाई हतारमा जेल हाल्ने काम भएको भन्दै पूवडिआइजी ठकुरीले अनुसन्धान गर्ने प्रहरीलाई यसरी कारबाही गर्दा प्रहरी संगठनमा दीर्घकालिन रुपमा असर पर्ने बताएका थिए । पूर्वडिआइजी रमेश खरेलले आफू पनि प्रहरीमा रहदाँ ७ किलो चरेश बोकेर अप्रेसनमा हिँडि अपराधी समाउन सफल भएको भन्दै विभिन्न बहाना लगाएर अनुसन्धान गर्ने अधिकारीलाई थुन्न नहुने बताएका छन् ।
लोहनीले काम गर्ने तरिका प्रहरीमा यसअघिका सबैले पहिलेदेखिनै गर्ने तरिका भएको भन्दै खरेलले यस विषयमा तत्कालिन प्रहरी प्रमुखले केही बोल्न नसक्नु नालायकीपन भएको भन्दै आक्रोश समेत पोखेका थिए । नेपाल प्रहरीका तीन पूर्वअधिकारीहरुले सुन तस्करी काण्डमा कनेक्सन देखिएका प्रहरीको बचाउमा बोलेको भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आपत्ति जनाएका छन् । राज्यको सेवासुविधा लिएर सुन तस्करलाई टेवा पुग्नेगरी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै गृहमन्त्री थापाले नेपाल प्रहरीका पूर्व एआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी, पूर्र्विडआइजी रमेश खरेल र हेमन्त मल्लले सरकारलाई असहयोग गरेको बताएका छन् । सुन तस्करीलाई पक्षपोषण गर्ने गरी अभियान संचालन गर्नुका साथै मिडियामा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै गृहमन्त्री थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जानकारी समेत गराएका छन् ।
लगतै गृह मन्त्रीको निर्देशनमा गृह मन्त्रालयले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी पूर्वप्रहरी अधिकारीहरुको भनाइको खण्डन गर्दै उनीहरुलाई सचेत समेत गराएको थियो । जारी विज्ञप्तिमा सुन तस्करीको संगठित अपराध अनुसन्धानका लागि गठित समिति र उसले सञ्चालन गरेका कामकारवाही लक्षित गर्दै विभिन्न व्यक्ति र संस्थामार्फत चलखेल भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ । गृहमन्त्रीका रुपमा आफ्नो सयदिनेको काम बारे जानकारी दिन गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा पनि गृहमन्त्री थापाले सुन तस्करीको अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्दै गर्दा ठूला माछाहरु छट्पटाइरहेको बताएका थिए । उनले सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्न गठित समितिको म्याद थपिने पनि बताएका थिए ।
गोरे र खत्रीलाई काठमाडौं ल्याउँने तयारी
साँढे ३३ किलो सुन प्रकरणको आरोपमा कारागारमा रहेका चुणामणि उप्रेती गोरे एसएसपी श्याम खत्री, छिरिङ वांगेल घलेलगायतका केहीलाई छानविन समितिले काठमाडौं ल्याएर थप अनुसन्धान गर्ने भएको छ । जिल्ला कारागार मोरङमा रहेका गोरे, एसएसपी खत्रीलगायतका केहीलाई छानविन समितिले काठमाडौं ल्याएर अनुसन्धान गर्न लागेको हो । सुन प्रकरणमा जरैसम्म पुग्नका लागि उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न लागिएको छानविन समितिले जनाएको छ । उनीहरूलाई काठमाडौं ल्याउनका लागि जिल्ला कारागार मोरङ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ, जिल्ला अदालत मोरङ र सरकारी वकिलहरूसँग छलफल गरिएको छानविन समिति जनाएको छ ।
शून्यमै सिध्याउने कोसिस नहोस् ?
त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट गायब भई अदालतमा मुद्दा शुरु भएको छ । तर अहिलेसम्म सुन कहाँ छ र यसका ठूला माछा को हुन भन्ने कुरा पत्ता लागेको छैन । बारम्बारका सुनकाण्डमा मुछिएका एमके नामका मोहन अग्रवाल सुन तस्करीका मुख्य नाईके मध्येका एक रहेको बयानका क्रममा खुलेको छ । तर उनी कहाँ छन भन्ने चाहीँ कसैलाई थाहा छैन ।
उनको नाममा ईन्टरपोलमा डिफ्युजन नोटिस जारी भएको भएपनि उनी प्रहरीको पहुँच भन्दा अझै बाहिर छन । अहिलेसम्म अनुसन्धान चुडामणी उपे्रती गोरे र श्याम खत्रीको फितलो र ढाँटछलको बयानका आधारमा अघि बढिरहेको छ । यो अवस्थामा कतै यो साढे ३३ किलो सुन काण्ड सुन नै पत्ता नलागी सेलाउने त होईन भन्ने शंका उब्जिएको छ । हरेक सुनकाण्डमा मुख्य नाइके र ठूला ब्यक्ति भन्दा पनि भरिया र आसेपासेहरु मात्रै पक्राउ परिरहेका छन् । यसअघि साढे ३३ किलो सुनकाण्डमा मुछिएका एसएसपी श्याम खत्रीलाई समातेर गहन रुपमा अनुसन्धान नै नगरी यसै अधुरो अनुसन्धान गरेर छाडियो ।
फेरी अर्को काण्डमा पनि श्याम खत्री नै मुछिए । यसअघि सुन तस्करका भरिया गोरेले भनेका छन् एमके नाम गरेका मोहन अग्रवाल नै सुनका मालिक भएको तथ्यहरु एक पछि अर्को गर्दै सतहमा आइरहेको छ । गोरेले बयानको क्रममा मोहन अग्रवाल नै सुनका असली मालिक भएको बताएका छन भने यसभन्दा अघि राप्रपा नेता भुजुङ गुरुङले सुनको लगानीकर्ता मोहन अग्रवाल भएको बयान दिएका थिए । सांढे ३३ किलो सुन काण्डमा मुख्य नाइके मोहन अग्रवाल भने अझै पनि फरार नै छन । मोहन अग्रवाल हाल ३३ किलो सुनकाण्डका मुख्य फरार अभियुक्त मध्येका एक हुन । उनी कहाँ छन् के छन् अत्तोपत्तो छैन । फरार रहेका हरिशरण खड्का र मोहन अग्रवाल दुबै अभियुक्तहरुलाई ईन्टरपोलमा डिफ्युजन नोटिस जारी गरिएको छ ।
यसअघि डिफ्युजन नोटिस जारी गरिएका श्याम खत्रीले भने आत्म समर्पण गरिसकेका छन । सुन तस्करीमा अगाडी नै संलग्नता रहेको भएपनि त्यसबेलाको अनुसन्धान चुस्त हुन नसक्दा तिनै व्यक्तिहरुले फेरी सुन तस्करीको अर्को श्रृङ्खला चलाइरहेको भेटिएको हो । उनीहरुलाई प्रहरी, अदालत र प्रशासनकै संरक्षण रहेको देखिएको छ । वर्षौ बर्षदेखि भरियास्तरका पात्रहरु फेरीएपनि एउटै समूहले सुन तस्करी गरिरहेका छन । अहिलेपनि प्रहरीले सबै मुख्य अभियुक्तहरुलाईलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन । बरु सुनका भरिया र सेटिङ मिलाउनेहरु धमाधम आत्मसमर्पण गर्न थालेका छन् ।
अनुसन्धान टोलीले भरिया र आसेपासेलाई पक्राउ गरेपनि मुख्य अभियुक्त को हुन र हराएको साढे ३३ किलो सुन कहाँ र को संग पत्ता लागेको छैन । यतिबेला साढे ३३ किलो सुन काण्डका बारेमा अनुसन्धान जारी छ । केही मानिसहरु प्रहरीले पक्राउ गरेपनि केही अभियुक्तहरुले धमाधम आत्मसमर्पण गरिरहेका छन । र तीनैले दिएको बयानका आधारमा अहिलेको अनुसन्धान अगाडी बढिरहेको छ । यसरी लामो समयसम्म पनि अनुसन्धानको टुङ्गो नलाग्दा यसले कुनै निचोड नपाउने हो की अशंका बढ्न थालेको छ । उक्त सुन काण्डमा उच्च पहुँचका व्यक्तिहरुको पनि आशंका गरिएको भएपनि ती को हुन् भन्ने पत्ता लाग्नु अगावै अनुसन्धान तुहिने हो की भन्ने डर पैदा भएको छ ।
अहिलेको साढे ३३ किलो सुन काण्डको मुख्य नाईकेहरु पत्ता नलाग्ने हो भने फेरी तीनै तस्करहरुको नेतृत्वमा सुन तस्करी को अर्को श्रृङ्खला सुरु हुनेछ । र अहिलेसम्म ३८ क्विन्टल तस्करी भएको तथ्य बाहिर आएको भने यो बढेर ३८ टन सम्म पुग्ने छ । यदि सुन तस्करीको श्रृङखलालाई यहीँ अन्त्य गर्ने हो भने यो अनुसन्धान गहिराईमा पुग्न जरुरी छ । र संलग्न भएका जो कोहीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी छ र यसमा ईश्वर पौडेल नेतृत्वको छानविन समिति अझ बढी गभ्भीर हुन जरुरी छ ।